‘लुभु सडक विस्तारको समस्या समाधान गर्ने उपाय मसँग थियो’ « Lalitpur Khabar
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका उत्तरपुर्वी ललितपुरको काँठ क्षेत्रमा रहेको नगर हो । तत्कालीन लुभु, लामाटार,सिद्धिपुर,इमाडोल र टिकाथली मिलेर बनेको यो नगरको विकाश, समृद्धि र समसायिक विषयमा हामीले नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठसँग भिडियो कुराकानी गरेको छौं ।
महालक्ष्मी नगरमा खानेपानीका हाहाकार रहेको गुनासो छ । यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
महालक्ष्मी नगरको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न हामीले एडिविसँग सम्झौतापछि काभ्रेको राशी खोलाबाट पानी ल्याउने योजना बनायौं । स्थलगत निरिक्षणको क्रममा रोशी खोलाको पानी खानीका कारण दविएर गएको पाइएपछि हामीले यो योजना छोड्नु पर्यो ।
त्यसपछि हामीले उपत्यका खानेपानी बोर्डको सहकार्यमा नगरपालिकाका विभिन्न ठाँउमा १६ वटा डिप बोरिड सञ्चालनमा ल्यायौ । कतिपय वडामा पानी वितरण सुरु भइसकेको छ । कतिपय ठाँउमा पाइप विछ्याउने काम भइरहेको छ । अहिलेयो योजना अन्तिम चरणमा आई पुगेको छ ।
साथै हामीले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मेलाम्चीको पानी भियाउने योजनातर्फ लागेका छौंं । यसअघि उपत्यकाका १७ वटा नगरपालिका यो योजनामा जोडिएका थिए । पहिलेमहालक्ष्मी नगरपालिकालाई मेलाम्ची खानेपानी वितरण गर्ने योजनामा समावेश गरिएको थिएन । मेलाम्ची खानेपानीको १ देखि ५ नम्बर वडासम्म पाइपलाइन विस्तारको लागि पहल गरिरहेका छौं । ढलतर्फ वडा नं. १ देखि ५ सम्म ढलसहितको वडा र ६ देखि १० सम्म ढलरहित वडा बनाउने हामीले निर्णय गरेका छौंं । वडा नं. १ देखि ५ सम्म अहिले ९० प्रतिशत काम पुरा भएका छन् । ढल नभएका वडामा सेफ्टी टयांकी बनाउने नक्सापास गर्दै नै संरचनासहित डिजाइन गरेर निर्णय गरेका छौं ।
ग्वार्को लामाटार सडक विस्तारका लागि नगरपालिकाले क कस्तो काम गरेको छ ?
बाटो विस्तारको क्रममा हामीले आफ्नो श्रोत प्रयोग गरेर मुआव्जा र राहत दिएका छौं । बाटो विस्तारको क्रममा विवाद आएको ठाँउमा राहत दिएका छौं । खेत मासिएको ठाँउमा हामीले राहत दिएका छौं । लुभु पुलनजिकै सार्वजनिक जग्गामा बनेको घरलाई केन्द्र सरकारले मुआव्जा नदिने भएपछि हामीले दिएर भत्काएका छौं । आउँदो दशैंसम्म कालोपत्र हुँदैछ ।
लुभु बजारमा बाटोविस्तार हुन सकेन न नि नगरपालिकाले यो बाटो विस्तार गर्न के काम गरेको छ ?
लुभु ऐतिहासिक शहर हो । हामी निर्वाचित हुनु भन्दा अघि नै उपत्यका विकाश प्राधिकरणले लुभु बजारको सडक विस्तार गर्ने क्रममा इस्टमेट डिजाइन गरेर निर्णय गरेर सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
हामी निर्वाचित भएर आउना साथ काम गर्न पाएको भए लुभु सडक विस्तारको समस्या समाधान गर्ने उपाय मसँग थियो । अहिलेसम्म प्राधिकरणले सिमांकन समेत गर्न सकेको छैन । यो निर्णयमा केही स्थानीयबासीहरुको विरोध छ । केही स्थानीय यही बाटो विस्तार गर्न माग गरेका छन् ।
तपाईसँग लुभुको बाटो विस्तार गर्न के योजना थियो ?
आजको अवस्थामा यो जटिल समस्या बनिसकेको छ । त्यसबेला नै गोदावरी खोलाबाट २ लेनको सडक दायाँतर्फ र बाँयादर्फबाट टाउन प्लानिड र अर्को लुभुमाविको तल्लो भागबाट माथि क्याम्पसमा लगेर जोडेको भए एउटा बाहिरीको शहर बन्थ्यो । यो ठाँउबाट सडक बनाउन अव सम्भव छैन । यहाँ अहिले धेरै संरचना बनिसकेको छ । सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिने आट गरे मात्र सम्भव छ ।
महालक्ष्मीको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि के गर्नुभएको छ ?
सिद्धिपुरलाई परालसँग जोडेर कलात्मक सरसामान बनाएर पर्यटन प्रबद्धन गर्न सकिन्छ भने लुभुको कला संस्कृतिलाई प्रबद्र्धन गरेर पर्यटकलाइृ आर्कषण गर्न सकिन्छ । यहाँ नेवारी संस्ंकस्ति र सम्पदालाई प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । बाजा बाजा लोप हुने अवस्थामा हामी पुर्नउत्थान गर्न विज्ञहरु ल्याएर सिकाइरहेका छौं ।
हामीले लाकुरी भञ्ज्यामा मनमोहन मेमोरियल पार्क र टावर बनाउदैछौं । नजिकै गणेशमान पार्क छ । यसबाट आन्तरिक पर्यटक प्रबद्र्धनको लागि सहयोग पुग्नेछ । लामाटारलाई कृषि पर्यटन प्रबद्र्धनमा जोड्ने योजना बनाएका छौं ।
नगरपालिकाको चुनौती के छ ?
पहिलो चुनौती त बजेट नै हो । हामीलाई सरकारले जनसंख्या र भूगोलको आधारमा बजेट दिन्छ । स्थानीय बजेट ६२ हजार मात्रै देखिन्छ । तर यहाँ बाहिरबाट आएर झण्डै ३ लाखभन्दा धेरै मानिस बस्छन् । हामी तीसबैलाई सेवा दिनुपर्छ । दोश्रो चुनौती जनशक्तिको छ । नेपाल सरकारले हामीलाईआवश्यक जनशक्ति दिदैन । हामी आफै भर्ना गर्न पाउदैनौं ।
५ वर्षमा के काम गर्ने योजना थियो ?
नगरपालिकामा मेयर निर्वाचित भएर आउनासाथ बेसलाइन सर्वे गरेर मास्टरप्लान बनाउने सोच बनाएको थिए । यसका लागि धेरै पैसा खर्च हुने देखियो । हामीले भिजन पुरा गर्न दिर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । हामी क्रमश काम गरेर लक्ष्य पुरा गर्दैछौं ।
यो अवधिमा गर्न नसकेको काम के रह्यो ?
मैले यो कार्यकालमा गर्न नसकेको काम चाही नगरपालिकाको भवन नै हो । हामीसँग जग्गा नभएर भवन बनाउन सकिएन । त्यसै कारणले हामी भाडामा बसिरहेका छौं । अहिले हामीले वडा नं.१ मा बहुउद्देश्यीय भवन बनाउदैछौं । अरु सबै वडाका भवनहरु यसै आर्थिक वर्षमा बन्दैछ । अर्को मनमोहन मेमोरियल पार्क र टावर बनाउने योजना थियो ।
कोरोनाबाट बच्न नगरपालिकाले के काम गर्यो ?
कोरोना माहामारीको पहिलो लहर आएदा असार को १८ गतेसम्म हाम्रो नगरपालिकामा कोरोना थिएन । असार १९ गते एक जनामा कोरोना देखियो । त्यसपछि सरकारले लकडाउन खोलेपछि मात्रै नगरपालिकामा कोरोना देखिएको थियो । हामीले किष्ट अस्पतालमा आइसोलेसन र आसियु बनायौं । हामीले ७६ वाटकोआयसोलेसन बनायौं । शिक्षा दिन जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्यौं ।
हामीले कामसँग खाद्यान्न कार्यक्रम चलायौं । राहत वितरण गर्यौं । हामीले नगरपालिकामा कसैलाई पनि भोकै बस्न नपर्ने अवस्था बनायौं । २ वटा निशुल्क एम्बुलेन्स राखेका छौं । हाइकियर ५० वेड संचालन गरेका थियौं । ४ जना डाक्डरलाई काउन्सिलिडसेवा दिन खटायौं । पोष्ट कोभिड क्लिनिक चलाइरहेका छौं । एण्टिजेन टेष्ट अहिले पनि भइरहेको छ । खोप कार्यक्रम निरन्तर चलाइरहेका छौं । ९० हजारले दोश्रो डोज लगाइसके । ४३ हजारलेपहिलो डोज मात्रै लगाएका छन् ।
अन्तरनगरपालिकासँग महालक्ष्मी नगरपालिकाले कसरी मिलेर विकाशको काम गरेको छ ?
छिमेकी नगरपालिकासँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । हामीले गोदावरी नगरपालिकाको पानी ल्याएर खाएका छौं । सूर्यविनायकदेखि गोदावरीकण्डसम्म पदमार्ग बनाउने काम गरेका छौं ।
वेरुजुको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले सिस्टम भित्र बसेर काम गर्ने हो । २ दशमलभ ३४ प्रतिशत हाम्रोमा बेरुजु देखिएको छ । देखिएको बेरुजु सबै बेरुजु होइन । कतिपय सैद्धान्तिक बेरुजु हुन्छ् । कुनै योजना पुरा नभएसम्म लिएको पेस्की बेरुजु होइन । कर्मचारीहरुले काम विशेषले लिएरको पैसा पनि बेरुजुमा हालेको हुन्छ । हामीले सबैकुरा इन्टरमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छौं ।
स्थानीय तहमा सिंहदरवारको अधिकारसँगै भष्टाचार पनि पुग्यो भन्ने जनताको आवाज छ नि तपाईको नगरपालिकामा अवस्था कस्तो छ ?
हामी ऐन अनुसार काम गरिरहेका छौं । त्यसैले हामीकहाँ भष्टाचार कम हुन्छ । स्थानीय तह भष्टाचारको केन्द्र भन्नु पुर्वाग्रहका कारण भनिएको हो । कही कतै भष्टचार भएको होला । जहाँ भष्टाचार भएको छ । त्यहाँ कारवाही गर्ने हो । सबैलाई एउटै रुपमा लिनु हुँदैन ।
एउटा उदाहरण दिन्छु । अछिल्लो वर्ष ८९ प्रतिशत बजेट केन्द्रले खर्च गरेको छ ।
त्यसमा ७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा आएको छ । स्थानीय तहमा भष्टाचार भयो भन्नु गतल छ । कही कतै भष्टाचार नै भएन भन्न खोजेको होइन । जहाँ भष्टाचार भएको छ । त्याहाँ कारवाही गर्ने हो । सबैलाई दोष दिनु हुदैन । स्थानीय तह सरकारको जग हो । स्थानीय तह नभएको भए कोरोना माहामारीमा के हुन्थ्यो भन्ने हामीले देखि सकेका छौं ।